BS Otu Oge
BS Nke ato
Ihe ntinye data
N + Ngwọta
Mmepe & Projectkwụ Projectgwọ Ọrụ
N + niile-na-otu Ngwọta
Ike ịrụ ọrụ Ngwọta Ngwọta
AMI Ngwọta na Laos
Ọnụ ego bara uru Smart Mita na Middle East
Osisi Linyang PV na China
Ngwakọta Ọrụ Ọrụ Ike nke Zhangshi Highway
Smart Keypad base Three Phase akwugo ugwo Mita LY-SM350
Smart Three adọ adọ anọ mita (CTVT ejikwara) LY -...
Smart Three adọ Indirect Meter (CT ejikwara) LY-SM ...
DIN-Rail Smart Single Phase akwugo ugwo Mita LY-SM120
Ot Single Single adọ Mita
LY-BM11 mita dị oke ọnụ ahịa otu mita mita, na-emetụta ndị ahịa bi na mpaghara ọrụ. Ha ziri ezi ma chekwaa ya nke ọma na ọrụ mgbochi, dabara adaba maka nchịkọta ego na-akwụ ụgwọ na nchekwa nchekwa.
Ejiri LY-BM11 mita dabere na usoro mgbanwe nke na-enye ọtụtụ nhọrọ dịka ahịa na ndị ahịa chọrọ.
Smart Card Dabere ugwo eletriki Mita LY-SM150
LY-SM150 mita a kwụrụ ụgwọ dị elu AMI smart single phase eletrik eletrik, na BS agbatị ahụ igodo / Carddị Kaadị Smart na / ma ọ bụ nhọrọ ụdị igodo. Akụkụ ha pụrụ iche nke modul nkwukọrịta-na-play na -emepụta ohere nke mgbanwe na ojiji nke ọtụtụ nke a pụrụ ịdabere na ya na ntanetị na ntanetị, nke kwesịrị ekwesị maka ndị ahịa C&I na ndị pere mpe.
LY-SM150 mita a kwụrụ ụgwọ usoro ziri ezi na ịlele & nlekota oru ibu na netwọk kwa yana mgbochi-tampering ọrụ, na-eme ka ha ezigbo maka revenue revenue na nchedo ngwọta. Ejiri ha site na Token 20-bit dabere na nkọwa STS ma ọ bụ CTS, na-agbaso usoro DLMS / COSEM, ụkpụrụ IDIS ma kwenye na DLMS, MID, IDIS, STS, SABS asambodo iji kwado mmekọrịta ha na AMI n'elu ikpo okwu
C & I CT / PTCT Usoro atọ CT / PTCT ejikọtara Smart Energy Meter bụ Smart Meter dị elu iji tụọ atọ AC na-arụ ọrụ / na-arụ ọrụ ike na ugboro 50 / 60Hz. O nwere ọrụ ọkaibe dị iche iche iji mata Smart Measure & Management of Energy, yana atụmatụ nke oke ziri ezi, nghọta dị oke mma, ntụkwasị obi dị mma, ọtụtụ mmụba dịgasị iche, obere oriri, usoro siri ike na ọdịdị dị mma, wdg.
LINYANG SPLIT-Sdị SINGLE-PHASE DIN RAIL MOTING KEYPAD Nkwụ ụgwọ ọrụ ike METER
Linyang Split-type Single-phase DIN okporo ígwè na-arịwanye elu Igodo nkwụnye ume Meter bụ ike IEC-ọkọlọtọ ejiri iji tụọ otu AC na-arụ ọrụ ike na ugboro 50 / 60Hz na ọrụ ịkwụ ụgwọ site na ahụigodo na TOKEN. Mgbe ndị na-azụ ahịa ga-achọ ịzụrụ ọkụ eletrik, ebe a na-ere ere ga-enye ha 20-bit TOKEN ezoro ezo na ozi ụgwọ ọkụ eletrik. Ndị ahịa na-etinye TOKEN n'ime mita ahụ site na ahụigodo ahụ, mgbe ahụ, mita na-edozi TOKEN ma na-akwụnye mita ahụ. Ebubo TOKEN nwere nọmba 20. Usoro ntinye data bu mkpesa na ọkọlọtọ STS.
Smart Three adọ adọ Mita LY-SM300
LY-SM300 mita dị elu AMI nwere ọgụgụ isi atọ nke ọkụ eletrik atọ, nwere njirimara pụrụ iche nke usoro nkwukọrịta na-egwu, na -emepụta ohere nke mgbanwe na ojiji nke ọtụtụ ntanetị na ikuku na-enweghị atụ, metụtara ndị obibi na obere ndị ahịa C&I.
LY-SM300 mita na-enye ọrụ ezigbo ogo na ntụkwasị obi na nha na nlekota na ntinye na ntanetị yana yana mgbochi mgbochi ọrụ, na-eme ka ha dị mma maka nchịkọta ego na nchekwa. E mere ha n'ụzọ zuru ezu na-agbaso ụkpụrụ DLMS / COSEM IEC ma kwenye na akwụkwọ DLMS.
LY-SM160 mita dị elu AMI smart single phase eletrik eletrik, yana PLC na / ma ọ bụ ikuku nkwụnye nkwụnye mgbakwunye na-arụ ọrụ, metụtara ndị ahịa C&I bi na obere.
LY-SM160 mita na-enye ọrụ ezigbo ogo na ntụkwasị obi na nha na nlekota na ntinye na ntanetị yana ọrụ mgbochi, na-eme ka ha bụrụ ezigbo ọnụ ala ngwaọrụ maka nchịkọta ego na nchekwa nchedo. E mere ha n'ụzọ zuru ezu na-agbaso ụkpụrụ DLMS / COSEM na IDIS ma kwenye na asambodo DLMS na MID iji kwe nkwa mmekọrịta ha na ikpo okwu AMI.
Smart Three adọ Indirect Meter (CT arụ ọrụ) LY-SM300CT
LY-SM300-CT dị elu AMI na-enweghị usoro atọ elekere eletrik atọ nke na-enye ọrụ dị oke mma nke klas 0.5s / 0.2s na ntụkwasị obi dị elu, dabara na ndị ahịa C&I dị iche iche yana ịgbanye metering. A na-egosipụta ha na ọrụ siri ike gụnyere ịtụ nha na nlekota oru na ntinye ntanetị na ntanetị dị iche iche na ọkwa ndị dị ugbu a, nlekota ike dị mma yana THD na-atụle wdg, nke na-enye ndị ọrụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ aka na nyocha ngwa ngwa ha.
Thedị modular nke LY-SM300-CT na-enye ọtụtụ nhọrọ ntanetị na ntanetị nkwukọrịta ikuku a pụrụ ịdabere na ya. Ndị MID, DLMS / COSEM na IDIS gbaara ha ikikere iji kwado usoro atumatu a pụrụ ịtụkwasị obi na nke mmekọrịta maka usoro AMI.
LY-SM300- CTVT dị elu AMI na-enweghị atụ atọ elekere eletrik elekere atọ nke na-enye ọrụ dị oke mma nke klas 0.5s / 0.2s na ntụkwasị obi dị elu, dabara na ndị ahịa C&I dị iche iche yana ịgbanye metering. A na-egosipụta ha na ọrụ siri ike gụnyere ịtụ nha na nlekota oru na ntinye ntanetị na ntanetị dị iche iche na ọkwa ndị dị ugbu a, nlekota ike dị mma yana THD na-atụle wdg, nke na-enye ndị ọrụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ aka na nyocha ngwa ngwa ha.
Moddị modular nke LY-SM300- CTVT na-enye ọtụtụ nhọrọ ntanetị na ntanetị nkwukọrịta ikuku a pụrụ ịdabere na ya. Ndị MID, DLMS / COSEM na IDIS gbaara ha ikikere iji kwado usoro atumatu a pụrụ ịtụkwasị obi na nke mmekọrịta maka usoro AMI.
LY-SM350 usoro a kwụrụ ụgwọ dị elu AMI smart atọ na-adọ ụgwọ ọkụ eletrik mita, na BS ike ahụ igodo / Smart Card ụdị na / ma ọ bụ gbawara n'etiti ahụ igodo nhọrọ, ha nwere ike ahazi ke ugwo ma ọ bụ Postpaid mode. Akụkụ ha pụrụ iche nke modul nkwukọrịta-na-play na -emepụta ohere nke mgbanwe na ojiji nke ọtụtụ nke a pụrụ ịdabere na ya na ntanetị na ntanetị, nke kwesịrị ekwesị maka ndị ahịa C&I na ndị pere mpe.
LY-SM350 mita a kwụrụ ụgwọ usoro ziri ezi na ịlele & nlekota oru ibu na netwọk kwa yana mgbochi mgbochi tampering ọrụ, na-eme ka ha ezigbo maka revenue revenue na nchebe ngwọta. A haziri ha dabere na nkọwa STS ma ọ bụ CTS nke 20-bit Token, na-agbaso usoro DLMS / COSEM, ụkpụrụ IDIS ma kwenye na asambodo DLMS, MID, IDIS, STS, na SABS iji kwenye na ha nwere ike ịmekọrịta ihe karịrị usoro AMI.
Smart Three adọ adọ Mita LY-SM360
LY-SM360 mita dị elu AMI smart three phase phase eletrik, yana PLC na / ma ọ bụ ikuku nkwụnye nkwụnye mgbakwunye na-arụ ọrụ, metụtara ndị ahịa C&I bi na obere.
LY-SM360 mita na-enye ọrụ ezigbo ogo na ntụkwasị obi na nha na nlekota na ntinye na ntanetị yana ọrụ mgbochi, na-eme ka ha bụrụ ezigbo ngwaọrụ dị ọnụ ala maka nnweta ego na nchekwa. E mere ha n'ụzọ zuru ezu na-agbaso ụkpụrụ DLMS / COSEM na IDIS ma kwenye na DLMS, asambodo MID iji kwe nkwa mmekọrịta ha na ikpo okwu AMI.
LY-SM 150Postpaid dị ezigbo ọnụ ọgụgụ Smart
LY-SM150 mita a na-akwụ ụgwọ bụ AMI smart single-phase meters, nwere njirimara pụrụ iche nke usoro nkwukọrịta na-egwu, na -emepụta ohere nke mgbanwe na ojiji nke ọtụtụ ntanetị na nkwukọrịta ikuku a pụrụ ịdabere na ya, nke kwesịrị ekwesị maka obibi na obere nha C&I ndị ahịa.
LY-SM150 mita akwụ ụgwọ ziri ezi na nha & nlekota ibu na ntinye ntanetị yana ọrụ mgbochi, na-eme ka ha dị mma maka nchịkọta ego na nchekwa nchedo. E mere ha n'ụzọ zuru ezu na-agbaso ụkpụrụ DLMS / COSEM na IDIS ma kwenye na asambodo DLMS, MID, IDIS iji kwe nkwa mmekọrịta ha na ikpo okwu AMI.
LY-SM 350Postpaid kwụrụ ụgwọ Smart Smart Phase Mita
LY-SM350 mita a na-akwụ ụgwọ bụ AMI atọ mita atọ, nwere njirimara pụrụ iche nke usoro nkwukọrịta na-egwu, na -emepụta ohere nke mgbanwe na ojiji nke ọtụtụ ntanetị na nkwukọrịta ikuku a pụrụ ịdabere na ya, dabara maka obibi na obere ndị ahịa C&I.
LY-SM350 postpaid usoro mita ziri ezi na ịlele & nlekota oru ibu na netwọk parameters yana mgbochi mgbochi tampering ọrụ, na-eme ka ha ezigbo maka revenue revenue na nchedo ngwọta. E mere ha n'ụzọ zuru ezu na-agbaso ụkpụrụ DLMS / COSEM na IDIS ma kwenye na asambodo DLMS, MID, IDIS iji kwe nkwa mmekọrịta ha na ikpo okwu AMI.
Factory: Nke 666 Linyang Road, Qidong, Jiangsu Province 226299, China
Isi ụlọ ọrụ: 18F, ụlọ 1, Zhengda Wudaokou Plaza, Nke 1199 Minsheng Road, Pudong New Area, shanghai 200135, China
Ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ozi kachasị ọhụrụ, biko jupụta n'ụdị dị n'okpuru.
eriri (48) "/www/wwwroot/global.linyang.com/wp-content/cache"